ပြည်တော်နိဗ္ဗာန်ဦးမဂ္ဂံပြည်တော်ဦးက မဂ်ရှစ်တန်ရွှေပြည်နိဗ္ဗာန်ဆိုက်ရောက်ရန်ပြည်တော်ဦးတဲ့ မဂ်လမ်းမှန်ရွှေပြည်တော်နိဗ္ဗာန်နန်းကိုလမှန်းဆမျှော်မြင်ဦးအစ မဂ်ရှစ်အင်ပြည်တော်ဦးမဂ်လမ်းစဉ်ကိုရွှေဘုန်းရှင် တွင်တွင်ပွားကြပါစို့လေး...။ ၁၁ ကြိမ်မြောက် ဂွမ်ဂျူးတရားပွဲ ~ pyidawoo
3:21 PM Pyidawoo No comments
“လစဉ် လတိုင်း ဆင်ကာနွှဲ ဂွမ်းဂျူးမြို့ရဲ့ တရားပွဲ”
... ဂွမ်ဂျူးမြို. ခီလ်ဆန်းင်ဆာ ဘုန်းတော်ကြီး၏ တိုက်တွန်းလျှောက်ထား ကူညီအားပေးမှုကြောင့် လစဉ် ဒုတိယအပတ် တနင်္ဂနွေနေ.တိုင်း ဂွမ်ဂျူးမြို. ခီလ်ဆန်းင်ဆာကျောင်း၌ တရားပွဲကျင်းပ ဓမ္မဒါနပြုခဲ့ရာ ၁၀ ကြိမ်တိုင် ပြီးစီးအောင်မြင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
အေးမြလှသော (ကိုရီးယား)တပေါင်းလ၏ ဒုတိယပတ်တွင်လည်း ၁၁ ကြိမ်မြောက် ဂွမ်ဂျူး မြန်မာတရားပွဲ ကို ၁၃-၃-၂၀၁၁ ရက်နေ့(တနင်္ဂနွေနေ့)နေ့လည် ၁၂ နာရီတွင် ကျင်းပမြဲတိုင်း ကျင်းပ ဓမ္မဒါနပြုမည်ဖြစ်ရာ ကာလေန ဓမ္မဿဝန သမဏာနဥ္မ ဒဿန နှင့် ကာလေန ဓမ္မ သာကစ္ဆာ မင်္ဂလာများ ဖြစ်ပွားစေကြောင်း ကုသိုလ်တရားကောင်းများ ဆည်းပူးနိူင်ရန် အသိပေး ဖိတ်ကြား အပ်ပါသည်။ တရားချစ်ခင် သူတော်စင်တို.~
“ ကိုယ်စိတ်ချမ်းမြေ့ တရားမွေ့တွေ့သိနိုင်ပါစေ။
သင်သိ ကျင့်သိ ထိုးထွင်းသိ အသိစုံပါစေ။
သာသနာအကျိုး မြတ်မြတ်နိုး သယ်ပိုးနိူင်ပါစေ။”